नेपालमा विदेशी पैसाको खोलो – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
५ कार्तिक २०७७, बुधबार १२:४१ English
नेपालमा विदेशी पैसाको खोलो
नेपाल सबै नेपालीको साझा राष्ट्र हो तर संविधान बनाउने नाममा एकीकृत नेकपा (माओवादी), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) तथा अन्य दलका नेताहरुले आफ्नो बपौती ठानेर नेपालको अस्तित्व माथि खेलवाड गरिरहेका छन्। २०६३ सालपछि दलका नेताहरुले विदेशीहरुको घोडा बनेर राष्ट्रप्रति जगन्य अपराध गरेका छन्। नेपालको राष्ट्रियता र प्रजातान्त्रिक संवेदनशीलता बुझ्न नसक्नेहरु इतिहासका कलङ्क हुन्। सत्तामोहले कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विदेशीको इशारामा सबै सत्यलाई झूट बनाएर सबै झूटलाई सत्य बनाउन खोजे। २०६३ को जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेका गिरिजाले राजा ज्ञानेन्द्रसँग भएको सहमति अनसार प्रधानमन्त्री बनी राजदरबारमा राजासँग २०४७ सालको संविधान अनुसार सपथग्रहण गरेको केही महिनामा आफैं राष्ट्रप्रमुख बन्ने लोभमा फसेर सबै संवैधानिक मान्यताहरु टोड्ने कार्य गरे। उनकै सहपाठी लक्ष्मणप्रसाद अर्याल अन्तरिम संविधानका मस्यौदाकार बनेर विवादास्पद अन्तरिक संविधानमा धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्र स्थापित गर्नमा सीआए र यूरोपियन राष्ट्रबाट सहयोग र ढाढस् प्राप्त गरेका थिए। पार्टीहरु तथा त्यस्तै संघसंस्थाहरुलाई विदेशीहरुले कसरी पाल्दो रहेछ भन्ने कुरा लुकाएर लुक्दैन। कस्ले कहाँबाट कति रकम खान्छ भन्ने कुरा सबै ओकल्न खोज्यो भने उसको चरित्रहत्या गरेको जस्तो ठानिन्छ तर यो सत्य हो कि नेपालमा अहिले जे जस्ता नेपालको हित विपरित कार्यहरु भइरहेका छन् ती सब विदेशीहरुले पैसाको खोलो बनाएको परिणाम नैं हो।
स्मरणरहोस्– कुनै पनि स्वाधीन राष्ट्रहरुलाई कमजोर बनाउन पश्चिमा राष्ट्रहरुले जस्तोसुकै अपराध र षडयन्त्र गरेर पनि आफ्नो लक्ष पूरा गर्ने गरेका छन्। उनीहरुले कसरी कस्लाई रकम दिएर कब्जामा लिन सकिन्छ भन्ने कुरा राम्ररी बुझेको हुन्छ। यसरी एशियाका देशहरुमा उनीहरुको दादागिरी पराकाष्टामा पुगेको छ। यसले नेपाललाई धेरै आक्रोशित बनाएको छ। अब बन्ने संविधानमा जातीय आधारमा संघीय र धर्मनिरपेक्ष राज्यको स्वरुप स्थापित गरेर नेपाललाई क्रिस्चियन राज्य बनाउनमा केही जातीय संस्था र व्यक्तिहरुलाई बेलायतबाट ११ करोड रुपैयाँ दिंदैआएको रोक्का गरेपछि को कहाँबाट कसरी संचालित भएका छन् भन्ने कुराको खुलसा भएको छ। त्यसै गरेर अमेरिका, बेलायत, यूरोपीयन् यूनियनले पनि यसरी नैं रकम बाँड्दै आएको कुरा पटक–पटक प्रकाशित हुँदै आएको छ। हडताल, बन्द गर्न नहुने कुरामा रोक लगाउन खोज्दा नमानेपछि ती विदेशीले दिंदैआएको रकम रोक्का गर्न धम्कीको भाषामा वक्तव्य दिएको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यसैगरी डेनमार्क, स्वीजरल्याण्ड, युरोपियन यूनियन्, अमेरिका र संयुक्त राष्ट्र संघका विभिन्न संगठनले गरीब, तथा पिछडिएका दलितलाई हिन्दूधर्म त्याग्न लगाएर क्रिस्चियन धर्म अपनाउन सहयोग गर्दै आएको पटक–पटक नेपालका दैनिक समाचार पत्रहरुमा समेत प्रकाशित हुँदै आएका हुन्। जनआन्दोलन अघि र पछि यूरोपियन यूनियन् खास गरेर नर्वेले माओवादीलाई प्रसस्त आर्थिक सहयोग र हतियार उपलब्ध गराएर सहयोग गरेको सार्वजनिक भइसकेको छ।
जवाहारलाल नेहरु विश्वविद्यालयका प्रा. एस.डी.मुनीले सन् २००८ नोभेम्वर १५ मा द हिन्दू–भारतीय समाचारपत्रमा २०६३ सालको जनआन्दोलनमा भा.रु. १ अर्ब दिएको एक लेखमा उल्लेख गरेका थिए। अनलाइनबाट अहिले पनि त्यो लेख पढ्न सकिन्छ। २०६३ सालपछिका अधिकांक्ष ठूला पार्टीका नेताहरु राजनीतिक ठग र भ्रष्टको रुपमा चिनिएका छन्। गिरिजाप्रसाद मरेर गए पनि उनका राष्ट्रघाती कार्यबाट नेपाललाई साह्रै अप्ठ्यारो परेको छ। हामीले यो बिर्सनु हुन्न कि मरेको माछा पोखरीमा पौडदैन, तैरिन्छ। सिद्धान्तबिनाको राजनीति पनि पोखरीको मरेको माछा जस्तो हो, यसले स्थायित्व कायम गर्दैन। सक्षम राजनीतिक नेताले कारण र परिणामको आधारमा न्यायपूर्ण सिद्धान्तको अगुवाई गरेका हुन्छन् तर नेपालमा ठीक त्यसको उल्टो छ। नेपालको अधोगति बनाउनु बाहेक यहाँका नेताहरुबाट बाहेक केही छैन। केही राम्रा काम गरेका भए त्यसको समर्थन पनि त हुन्थ्यो तर नेताहरुको नियत नैं खराब भएपछि के गर्न सकिन्छ र? खराब नेताको चित्रण गर्दै इजरायलकी प्रधानमन्त्री गोल्डामाएरले भनेकी थिइन्– एउटा नेताले जबसम्म आफ्नो देशलाई युद्धभूमिमा परिणत गराउन सक्तैन त्यो नेता बन्न योग्न हुुन्न।’ भनेझैं नेपालमा जसले मान्छे मार्छ, अपहरण गर्छ, बन्द, हडताल, लुट मच्चाउँछ, अराजकता फैलाउँछ त्यहीलाई नेता मानिन थालिएकोले नेपालमा २०६३ सालदेखि सबै त्यस्तै नेता बनेका छन्। सबैले बुझ्नुपर्ने हो–आकाशमा दुइटा होइन एउटा सूर्य हुन्छ। राष्ट्रिय राजनीतिभित्र पनि तथ्य र सत्यलाई तोडमोड गरेर जे मन लाग्छ त्यही गर्ने होइन। नेपाल जस्तो स्वाधीन र स्वतन्त्र राष्ट्रलाई विखण्डन गराउन सर्वप्रथम यहाँका जनताको नैतिक पतन गराउनसक्नु पर्दछ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय गुप्तचर संस्थाहरुले षडयन्त्रपूर्ण नीति हो। त्यसकोलागि त्यहाँका विभिन्न पिछडिएका वर्ग, समुदाय, जाति, जातभात र सम्प्रदाय र संघसंस्थाहरुमार्फत् जनता बीचको एकता टुत्र््कयाउन यिनैं संघ संस्थाहरुबाट विद्रोह मच्चाउने, आतंक, लुटमार, बन्द र हडताल गराउन लगाइन्छ। यूरोपका कैयौं देशहरु विखण्डन गराउनमा यही नीति अवलम्वन गरियो। पूर्व सोभियत संघको चेचन्यामा जातीय बिद्रोह गराइयो। पूर्वी टिमोरलाई इन्डोनेशियाबाट टुत्र््कयाइयो, युगोस्लाभियालाई जातीय अधिकारको नाममा विभिन्न राज्यमा विभाजित गराइयो। लेबलानमा मुस्लिम र क्रिस्चियनहरुको बीचमा युद्ध गराएर दुइटा सरकार र दुई राजधानी बनाएर रक्तपात गराउने काम भइरहेको छ। जातीय र धार्मिक युद्ध मच्चाएर सन् २०११ को प्रारम्भमा सुडानलाई उत्तर र दक्षिण राष्ट्रमा विभाजित गराइयो। सन् २००६ देखि नेपाल सिद्धयाउन पश्चिमी देश र उनीहरुको गुप्तचर संंस्था लागिपरेका छन्। हिन्दूहरुको उद्गम ध्वस्त बनाएर नेपाललाई क्रिस्चियन राज्य बनाउन अर्बौ डलर भित्रिरहेको कुराले नेपाली जनता विदेशीहरुसँग आक्रोशित बन्दैछन्। भोलिका दिनमा नेपालीहरुबाट उनीहरु लखटिन सक्छन्। यो कुरा उनीहरुले बेलैमा बुझ्न सकुन्। आफ्नो देशको अस्तित्व बचाउन नेपालीहरु जो जहाँ छ आफूहरुलाई समाहित गर्छन्।
सन् २०११ अपे्रलमा इण्टर डिसिप्लित्तरी एन्डसिस्टम् (आईएडिए) ले एक सर्वेक्षण गरेको थियो। जसमा ९६ प्रतिशत जनताले संघीय स्वीकार नगरेको, ५७ प्रतिशतले नेपाल हिन्दूराष्ट्र नैं रहनुपर्छ, ४८ प्रतिशतले नेपाल संवैधानिक राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्रको पक्षमा राय प्रकट गरेको खुलाशा गरेको थियो। अतः विदेशीले चाहे अनुसार नेपाली जनताको आस्था माथि कुठराघात गर्दै जबरजस्त गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, संघीयतालाई लाध्न खोजेकाले अस्तित्व रक्षाकालागि स्वदेश विदेशमा रहेका नेपालीहरु देशद्रोहीहरुको विरुद्ध एक बन्दैछन्। वैधानिकता, नैतिकता र कानूनी आधार गुमाइसकेका कांग्रेस, एमाले, माओवादी र अन्य दलालहरुको विश्वासमा परेर नेपालको अस्तित्व गुम्न नदिऔं भन्ने आवाज चार–चौरास् उठेको छ। वास्तवमा पश्चिमाहरुको यो हिन्दू र बौद्धको आधिकारिक थलोप्रति कुनै डाहा र ईर्षा नरहनु पर्ने हो तर उनीहरु हिन्दू र बौद्धलाई फुटाएर क्रिस्चियन धर्मलाई स्थापित गर्न आफ्ना दलालहरु सक्रिय गर्न आफ्नो कर्तव्य ठान्दछन्। पश्चिमी देशहरु पैसाको बलबाट नेपाललाई आधार इलाका बनाएर ‘फ्रि तिब्बत’ को नाममा चीनलाई टुत्र््कयाउन चाहन्छन् तर यो उनीहरुले सोचेको जस्तो सजिलो छैन। परिआएमा चीन लगायत नेपाल जस्ता विदेशीहरुबाट पीडित राष्ट्रहरुले सम्राज्यवादी र विस्तारवादीको विरुद्ध हतियार उठाउन बाध्य हुने अवस्था आउँछ। नेपालको अस्तित्व बचाएर राख्न हाम्रा पुर्खाले कहिले आफ्नो स्वार्थ हेरेनन्। अहिले नेपाललाई टुत्र््कयाउन विदेशीले यहीँका गद्दार नेताहरुलाई प्रसस्त रकम खर्च गरेर नेपाल विरुद्ध संगठित बनाएको तथ्यहरु खुलस्त छन्। २०६३ सालपछिका नेपालका सत्तासीनहरु भन्छन्– हामीलाई कसैले ढाल्न सक्तैन।’ तर भोलिको दिनमा उनीहरुले यो भूमिमा लुकेर बस्ने पनि ठाउँ पाउने छैनन्।
आफूलाई संवैधानिक राजतन्त्र र प्रजातन्त्रको अगुवा ठान्ने कांग्रेसले पद र पैसाको लोभमा परेर चक्रब्यूहमा फसेको छ। सत्तामा रहँदा कांग्रेस र एमालेको कुशासनको कारणले माओवादी विद्रोह उठेको थियो। विदेशीहरुले निहु बनाएर विद्रोही माओवादी, कांग्रेस, एमाले सबैलाई एक ठाउँमा उभ्याएर नेपालको अधोगति बनाउन सहयोग पुर्‍याए। आन्दोलन सफल भएको केही महिनापछि अवैधानिक तरिकाले जवरजस्त धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र र संघीयताको बिषवृक्ष रोपियो। यो नैं अहिलेको संकटको कारक हो। नेपाललाई समाप्त गर्ने संविधानसभा भङ्ग भएपछि नेपाली जनताले राहातको महसुस गरेका छन्। अब फेरि यिनै दलाल नेताहरुको पछि लागेर देश डुबाउने काम नगरौं। कांग्रेस, एमालेलाई माओवादीले खेलाएर सत्ता कब्जा गर्ने कुरा यिनीहरु बुझ्दैनन्। यिनीहर पनि भ्रष्ट–देशद्रोही बाटोमा रहेकाले यिनीहरुको बुद्धि कहिले पलाउँदैन। अब देश बचाउन यिनीहरुको भनाई र विदेशीहरुको षडयन्त्रको पछि लाग्नु हुन्न। संविधान असफल भएपछि वा संविधान नबनेको अवस्थामा राज्यका प्रमुख स्थायी अङ्गहरु–अदालत, नेपाली सेना, प्रशासकीय व्यवस्था, प्रहरी आदि कानून अनुसार स्वतः सक्रिय हुने परम्परा छ। राज्यका प्रमुख अङ्गहरु आफंै सचेत भएर देश बचाउने काम गर्छन्। हामी देशभक्त नेपालीहरुको कर्तव्य हो कि यो देशको सार्वभौम अस्तित्व बचाउन खुलेर अगाडि बडौं। देशको पहिचान बाँचेमा मात्र हामी सार्वभौम नेपालका नेपाली हुन्छौं।
२५ कार्तिक २०६९, शनिबार ०६:४३ मा प्रकाशित